Marxuum Maxamed Cali Samatar [W/Q: Yusuf Garad] - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Marxuum Maxamed Cali Samatar [W/Q: Yusuf Garad]
Allah ha u naxariisto General Maxamed Cali Samatar wuxuu ahaa oday Soomaaliyeed oo in badan dalka u soo shaqeeyay.
Wuxuu ahaa sarkaal gaaray derejada ugu sarreeysa taariikha ciidanka Soomaaliya oo noqday Sarreeye Guud ama lieutenant General. Wuxuuna ahaa siyaasi, xilligii uu Militerigu dalka ka talinayay wixii dhacay ee san ammaantooda wax ku leh, wixii la dhimayna ay adag tahay in eeddooda laga beri yeelo.
Genereal Samatar waxaa uu ka mid ahaa Saraakiishii ugu horreysay ee Ciidanka Soomaaliyeed. Wuxuu ahaa dufacadii labaad ee saraakiil Soomaaliyeed ee abid ka qalin jebiyay akademi ciidan. Waxay akadamiga Modena ee dalka Talyaaniga isku mar ka qalin jebiyeen oo ay Xiddiglayaal wada noqdeen rag ay ka mid ahaayeen Madaxweyne Cabdullaahi Yusuf iyo General Maxamed Faarax Caydiid.
Ma rabo in aan dooddaas u galo hadda, qormadeyduna mowduucaas kuma saabsana. Labada midka aad u taqaanba General Samatar wuxuu ka mid ahaa Saraakiisha Kacaanka curisay. Waxay awooddiisu kor u sii kacday markii 1973 la toogtay Saraakiil Sare oo ka mid ahaa 25-ka Golaha Sare ee Kacaanka.
Samatar oo la taagan Margret Tatcher
General Samatar anigu si shakhsi ah uma aqoon. Marka laga reebo khudbadihiisa aan goobjoog u ahaa iyo kuwa aan warbaahinta ka dhegeystay. Waxaanse fursad u helay in aan dhowr jeer la safro, dhegeysto isaga oo dad la kaftamaya, su’aalana aan weydiiyo.
Saddex dayaaradood ayaan Muqdisho uga baxnay. Anigu waxaan la socday tan labaad oo weriyayaal iyo ciidan sidday. Waxay na dhigtay Berbera ka dibna kolonyo baabuur ah oo si waalan u xawaareyneysa ayaa na geysay madaarka Hargeysa oo markii aan sii istaagnayba ay soo caga dhigatay dayaaraddii nagu dejisay Berbera. Bal maxaa Berbera naloo geeyay haddii dayaaradda na sidday oo faaruq ah iyo annaga oo baabuur ku joogna aan Hargeysa u wada soconno? Sababtaas ilaa iyo hadda ma helin cid ii fasirta.
Laakiin General Samatar marka aan in badan dhegeystay isaga oo madax iyo shaqaalaba la sheekesanaya waxay ahayd safari isaga oo Wasiirka Koowaad ah aan u raacay Kormeer uu ku sameynayay Warshadda Dharka ee Balcad oo soo saari jirtay lebbiska ciidanka iyo ardayda Dugsiyada. Iyo Warshadda Sonkorta, Barafuunka iyo Khamriga ee Jowhar iyo weliba beeraheeda kahasabka oo ku fadhiya dhul aad u baaxad weyn. Waxaa loo marti ahaa Wasiirka Warshadaha, Xuseen Cabdulle Calasow.
Waxaan muran ku jirin in Samatar uu astaan u yahay in qofka isku kalsoon, dadaalna la yimaada uu wax weyn qabsan karo.
Mar ay shaqaalaha Wasaaradda Warfaafintu u sheegteen in ay shaqo badan yihiin oo ay yihiin dad Kacaan ah, oo markaa gunnooyin iyo u roonaasho kale ay sidaa ka dalbeen, Samatar waxaa laga weriyay in uu la kaftamay. Waan ogahay ayuu yiri in aad shaqo badan tihiin, laakiin waxaanan kala garan karin in ay idinka tahay Kacaannimo iyo in ay idinka tahay belwad oo kale in aad u jeceshihiin heesidda, caweyska cayaaraha hiddaha iyo dhaqanka, Raadiye-ka-hadalka iyo shaashad-ka-muuqashada.
Allah ha u naxariisto Maxamed Cami Samatar, qoyskiisa, ehelkiisa iyo saaxiibbadiis samir iyo Iimaan ha ka siiyo.